ဘာလို့ ဒီအချိန်မှာလဲ? မြို့ပျက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးနဂိုအခြေအနေရောက်ခဲ့တဲ့ Sex Shop ရဲ့ ထူးဆန်းဖွယ်ဖြစ်ရပ်။ - JAPO Japanese News
ဂါ 14 Sep 2021, 11:16 မနက်
၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကို ခံစားခဲ့ရပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ဆူနာမီရိုက်ချက်ကြောင့် တိုးဟိုခုဒေသဟာ ဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။
မြို့လည်း ပျက်စီးခဲ့ပြီး ကျွန်တော့မိဘနေအိမ်လည်း ဘေးသင့်ဒေသလိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမျိုး ၃ ယောက်ကလည်း ဆူနာမီနဲ့အတူ မျှောပါသွားခဲ့ပါတယ်။
မြေပြင်အခြေအနေကလည်း ရှုပ်ထွေးနေပြီး ဘယ်သူက ပျောက်နေလဲဆိုတာတောင်မသိရတဲ့အပြင်၊ နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေကိုလည်း စိုးရိမ်ရပါတယ်။
ငလျင်ဆိုတာက တစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်ပြီးတာနဲ့ မပြီးသွားဘဲ အဓိကငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးနောက်မှာ နောက်ဆက်တွဲငလျင်ငယ်တွေက ဆက်တိုက်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိပါတယ်။
ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၁၀ နှစ်ကြာသည်အထိလည်း နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေက ဆက်လှုပ်လျက်ရှိပြီး ငလျင်လှုပ်ပြီး ၁ လအတွင်းမှာ လှုပ်ခတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေကလည်း အတော်လေးပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီကာလမှာ တိုကျိုကလူတွေလည်း ရင်တက်မအေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ၁ ပတ်အကြာမှာ လုပ်ငန်းပြန်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ Sex Shop ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပုံမှန်ဆိုရင် ဟိုတယ်ကနေ ဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့အခါ မိန်းကလေးတွေက သွားရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပေမယ့် ဟိုတယ်တွေလည်း လုံးဝရပ်နားထားရတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် နေအိမ်ကိုခေါ်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာပါတယ်။
အပေါ်ကစာကတော့ Sex Shop ကို အသုံးပြုတဲ့အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့စကားသံဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုတွေက ရေစီးနဲ့မျှောပါပြီး သေလားရှင်လားမသိတဲ့သူ။
ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူထံ မပြောပြချင်တဲ့စကားသံတွေကို ထုတ်ပြောချင်တဲ့သူတွေလည်း Sex Shopကိုအသုံးများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တိုးဟိုခုက အမျိုးသားတွေက စိတ်ရှည်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိသားစုနှင့် အသိမိတ်ဆွေတွေဆီ ပျော့ညံ့တဲ့ပုံစံကို မပြချင်ပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ရင်ဖွင့်စကားတွေပြောဖို့ရန် Sex Shopကိုအသုံးပြုကြပုံရပါတယ်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ မိသားစုတွေ ရေစီးနဲ့မျှောပါသွားတာကို ဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့ တွေးထင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ခံစားရသူတွေဘက်က စိတ်ဒဏ်ရာကို ဘယ်လိုကုစားသလဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စာနာနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒီကာလမှာ အမျိုးမျိုးသော လိုအပ်ချက်တွေလည်း များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန် တိုကျိုမှာလည်း ဓာတ်ဆီကို လွယ်လွယ်ဝယ်မရပေမယ့် သဘာဝဘေးဒဏ်သင့်ဒေသမှာဆိုရင် ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ကာစတန်မာရဲ့အိမ်ကို သွားဖို့တောင် အခက်အခဲဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ငလျင်လှုပ်ပြီး တစ်လအကြာမှာတော့ ဟိုတယ်အသီးသီးက ပြန်အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။
ရေနဲ့အတူမျှောပါသွားတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကတော့ ယာယီအဆောက်အအုံတွေမှာ နေထိုင်ရပေမယ့် နံရံတွေက ပါးလွန်းပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က အသံတွေကိုလည်း ကြားနေရပါတယ်။
ဒါကြောင့် လိင်မယားတွေလည်း အာဝါဟဝိဝါဟ မပြုတော့တာတွေ များလာပြီး အမျိုးသားတွေက ဟိုတယ်ကနေ မိန်းကလေးတွေကို ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဥ်တွေလည်း များလာတဲ့ပုံရပါတယ်။
အမျိုးသားတွေတင်သာမက Sex Shop မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
PTSD (ထိခိုက်မှုအပြီးဖြစ်သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ) ကို ခံစားနေရတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုကြီးတွေကို ခံစားရတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီဖြစ်စဥ်ကို ခဏသတိရပြီး အသက်ရှုရကြပ်လာတာတို့၊ အဖျားတက်ပြီး ချွေးထွက်တာတို့ ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
PTSD က ပိုဆိုးလာလည်း အထက်ကပြောခဲ့သလို ပြင်းထန်းတဲ့နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေ ဆက်လှုပ်နေတာမို့လို့ ရောဂါအခြေအနေက မသက်သာခဲ့ပါဘူး။
အမျိုးသမီးတွေလည်း တခြားသူတွေနဲ့ စကားပြောပြီး အသားချင်းထိကာ လုံခြုံမှုရလိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ရော အိမ်ရောမရှိတော့တဲ့အတွက် အသက်ရှင်ဖို့အတွက် Sex Shop မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်ငလျင်ဒဏ်ခံရတဲ့ဒေသဟာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုရိုနာကူးစက်တဲ့ဖြစ်စဥ◌်မျိုးနဲ့မတူဘဲ၊ ရုတ်တရတ်မျှော်လင့်ချက်မဲ့သွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ထဲကမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရဖို့အတွက် လူအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆက်သွယ်လိုကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်….
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသား ၉၀% အထက်မှာ ချစ်သူရည်းစားမရှိကြဘူး!?
“様” ဆမရဲ့ အသုံးနှုန်း
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ တော့ပ်စတား၊ ငြမ်းဆင်ခြင်းအလုပ် အလွန်မိုက် !!!